meksikana trano fisakafoanana ao choctaw casino
meksikana trano fisakafoanana casino everett road
XLMedia, ny Jersey-monina lalao an-tserasera haino aman-jery manam-pahaizana manokana, dia nanambara ny fahazoana WhichBingo, UK-ny foibeny online bingo reviews namany sary, fa tsy fantatra isa kickapoo lucky eagle casino age requirement. XLMedia naorina tamin'ny taona 2008 dia ahitana fizarana telo.
Ny 'Famoahana' ny sampan-draharahan'ny manana mihoatra noho ny 2,000 tranonkala, raha ny 'haino aman-Jery Nomerika Buying' sandriny mamolavola sy mizara ny media amin'ny aterineto ny fampielezan-kevitra kickapoo lucky eagle casino address. Ny tena zava-dehibe ny 'Tambajotra Affiliate' fizarana mitantana ny tokotokony ho 300 affiliate mpiara-miasa izay hiteraka fidiram-bola ho an'ny XLMedia amin'ny alalan'ny vaomiera kickapoo lucky eagle casino azul restaurant. WhichBingo niorina tamin'ny taona 2000 amin'ny Phil Fraser, ny toerana amin'izao fotoana izao ny tompony, izay nanara-maso ny aterineto bingo hamerina hijery ny namany sary mba handresy folo orinasa mari-pankasitrahana noho ny asa. Ny orinasa ihany koa ny mitantana ny haneho mari-pankasitrahana, ny WhichBingo Loka, sy mamoaka azy manokana UK mifantoka 'Online Bingo Tatitra Isan-taona' meksikana trano fisakafoanana ao choctaw casino.
Naneho hevitra ny orinasa farany fahazoana, Ory Weihs, TALE jeneralin'ny XLMedia nilaza hoe: "faly Izahay efa nahazo toy izany koa heverina UK brand. WhichBingo mifanaraka tsara ao amin'ny tetika ny hahazo ny avo lenta ny fananany manerana nifehy ny tsena. "XLMedia efa mahavariana 2017 araka ny hita avy amin'ny feno-taona ny vokatra ara-bola, navoaka tamin'ny volana Martsa taona 2018, izay nampiseho ny vola miditra mampitombo ny 33% ny $137.6 m, raha tombony lehibe ihany koa niakatra 37% ny $73.1 m, raha oharina tamin'ny taona teo aloha.
Weihs nanampy hoe: "mbola manohy mijery Isika salama fantsona ny fahazoana tombontsoa rehefa mikatsaka ny samy hampahatanjaka sy hampivelatra ny tsena tonga nandritra ny taona 2018."Ny fahazoana ho nanampy an-XLMedia portfolio miaraka roa finoa orinasa, Nettikasinot.com ary Netticasinot.com izay nividy €15m any amin'ny janoary taona 2018. meksikana trano fisakafoanana casino everett road.